Ebe iri nri iri na abụọ kachasị mma na Kildare - IntoKildare
Restaurantslọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ahịa, ụlọ mmanya na ndị na-emepụta nri nke Kildare dị njikere ịnabata gị. Ihe nlere site na nhọrọ nke nri iri n'èzí anyị jikọtara ọnụ nke ga-enye gị uto nke ihe a na-enye na Kildare n'oge ọkọchị a.
Silken Thomas Enweghị ederede 2 768x767
Nwee nri ehihie ma ọ bụ nri abalị site na ọtụtụ menu na ogige mara mma mara mma na Silken Thomas, na obodo Kildare. Oghere iri nri bụ maka awa 2 na mpaghara iji nwee obi ụtọ na tupu ma ọ bụ tinye biya biya nri abalị ma ọ bụ mmanya. Iji tinye akwụkwọ, pịa Ebe a ma ọ bụ kpọọ 045 522232.
Swans Na Green Lake
Swans na Green, otu ezinụlọ dị ụtọ na ụlọ oriri na ọéụéụ dị nso n'akụkụ ọdọ mmiri mara mma, na-emeghe maka iri nri n'èzí site n'ụtụtụ ruo abalị na-enye nri ụtụtụ na nri ehihie yana ihe oriri ndị na-atọ ụtọ iji soro tii na kọfị gị. Enweghị akwụkwọ ntinye akwụkwọ.
Longha nke Kilcullen
2021 05 24 Ọhụrụ 71024768 I1
Ọ dị na nsọtụ Curragh na n'akụkụ Osimiri Liffey, Longha nke Kilcullen, ga-emeghe Tuesday na Sunday maka nri ehihie na nri abalị, debe tebụl gị Ebe a.
Nkwụ na K K
Kclub Thepalmer Ofel 2
Okomoko ohuru na nke ugbu a ma nke a na-emesi obi ike, Ihe nkwụ na K Klọb na-enye nri ụtụtụ na-egbuke egbuke ma na-ebido n'isi ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị na mgbede na mgbede niile gafere iwu ikpeazụ. Ogige ahụ mara mma nke Palmer's nwere ọmarịcha ụlọ nwere oghere nwere ike ịdọghachi azụ na iko mpempe akwụkwọ mpịakọta ka ị wee rite uru site na ihu igwe kachasị mma, yana usoro olulu ọkụ maka ndị ọbịa ka ha nwee ike ị enjoyụ ihe ọ drinkụ -ụ tupu nri abalị ma ọ bụ otu abalị n'abalị dị ka mgbede na-ada na ala. Ihe a na-elekwasị anya na Palmer bụ na nri nkasi obi nke oge a, site na nri oge ochie na achịcha mbadamba, ịkekọrịta efere, salads ọhụrụ na azụ, nri dị ukwuu site na imi ihe na ọtụtụ akụkụ na-emesapụ aka ma na-atọ ụtọ. The Palmer na-ewe anwụ na-acha na-eju afọ iji mepụta efere na-eduga na ọnọdụ okomoko ma na-adịghị mma.
Ala Balyna, Moyvally
Nịm gburugburu 550 acres nke akụkọ ihe mere eme Kildare obodo, Moyvalley Hotel & Golf Resort bụ ebe kachasị mma maka nri izu ike ịchụkwudo ndị enyi gbara gburugburu gburugburu. Mepee maka nri ehihie na nri abalị, ekwentị (0) 46 954 8000 ime ndoputa.
Telọ Tea nke Victoria 2
Nwee achicha, kọfị ma ọ bụ nri ehihie n'ogige anwụ na-acha nke Telọ Tea nke Victoria na Straffan. Mepee Tuesday ruo Saturday, enweghị akwụkwọ ntinye akwụkwọ achọrọ.
Zuo ike ma nwee obi uto na menu nke na-enye ngwakọta nke ego ezinụlọ na nri ndị Europe na Oak Bar Terrace na Nkwari akụ Westgrove na Clane. Inye nri ehihie site na 12pm ruo 4pm na nri abalị site na 5pm ruo 8pm. Ekwesịrị ịme ndaputa nri niile tupu oge eruo site na ịkpọ 045 989900
Lily & Anụ ọhịa enye a nhọrọ nke sandwiches, salads, emeso na tii na kọfị niile jere ozi si ha Devid agụghị ndị gbara gwongworo, na oche dị, na Naas Racecourse. Takeaway picnics dịkwa maka ịnụ ụtọ na Racecourse ma ọ bụ n'ihu. Iwu Ebe a.
Igirigi Idoro 20201223 011455 768x576
The Igirigi igirigi Gastropub n'ime obodo nke Gbuo na-emeghe Wednesday ruo Sunday maka nri ehihie na nri abalị. Kporie ndụ n'ime obodo ndị ewepụtara gụnyere biya biya sitere n'ọtụtụ ebe ha. Tinye tebụl okpokoro gị Ebe a.
Nhọrọ nke brunch, nri ehihie na nri abalị na-echere Onyeikpe Roy Beans, Newbridge. Mepee site na 8 ụtụtụ ruo 11.30 nke Mọnde ruo Sọnde, tinye tebụl gị Ebe a.
Nchịkọta Keadeen Gard 5 450x600
Saddlers Ogwe & Bistro na Hotel Keadeen na Newbridge na-emeghe maka nri ehihie site na 12.30pm ruo 2.30pm (menu a kpaara ókè) na nri abalị 5pm ruo 8.30pm. Ha na-enyekwa ebe a na-ere mmanya n'èzí 12.30pm ka ha mechie ogige Beer & Cocktail. Obere ohere maka iri nri na ị drinkụ ihe ọ drinkụ drinkụ, naanị ịbanye - enweghị ntinye akwụkwọ.
The Gallops talọ oriri na ọtaụ atụ na Dalọ nkwari akụ Kildare na nketa obodo nke Kildare, nwere a dịgasị iche iche na-atọ ụtọ menu maka nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị. Detuo tebụl gị Ebe a.
Ahụmahụ akwụkwọ ikike onyinye Kildare kacha elu
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma Kildare
Oge ezumike afọ ọhụrụ nke Kildare maka 2022